सन्धिखर्कको शान्ति बगैंचामा यात्रु सहायता कक्षको सुरु
असोज ११ ,अर्घाखाँचीबुलेटिन -दशै नजिकैसगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिकको प्रहरीको समन्वयमाआज देखी सन्धिखर्कको शान्ति बगैंचामा यात्रु सहायता कक्षको सुरु भएको छ दशै सुरु भएसगै जिल्लामा जिल्ला भन्दा बाहिरका जिल्ला भित्रका छोटो् तथा लावो दुरिका सवारी गाडी अद्यावधिक बडि आउने भएकोले आज देखी सहायता कक्षको सुरु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिजयराज पौडेलको जान्कारी दिनु भयो।
चारपर्बको बेलामा सजिलैसँग यात्रु लाई आआफ्नो गन्तब्य सम्म सुरक्षित पुराउने यात्रु सग भासा राम्रो बोल्ने चालक सहचालक सग राम्रो बोल्ने क्षेमा भन्दा बडि नबोक्ने सिट प्यक मात्र बोक्ने यात्रागर्दा साब्दानी अपनाउने भन्दै जिल्ला प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश बिस्ट्ले जान्कारी दिनु भयो मोटरसाइकल बस जिप लगायतका गाडी तुलनामा यात्रा बढी असुरक्षित हुन्छ । अझै राजमार्गमा त झन् बढी जोखिम हुन्छ ।
यदि तपाईँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै कुरामा सतर्क हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले आफू जाने ठाउँको बाटोको बारेमा राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ । जाने ठाउँको बारेमा सबै थाहा छ भनेर लापर्वाही गर्नुहुँदैन । त्य।।।।सैले बाटो कस्तो छ ? बाटोमा खाल्डाखुल्डी छन् कि ? उकालो–ओरालो के कस्तो छ ? सडक बनाइँदै छन् कि ? बनाइँदै छन् भने कस्तो अवस्थामा छ ? जस्ता सबै कुरा बुझ्नुपर्छ ।
सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा बाटो पिच, ग्राभेल वा कच्ची छ कि कस्तो छ ? बाटो समथर, पहाडी, हिमाली कस्तो हो बुझेर जाने हो भने यात्रा सहज हुन्छ जिल्ला ट्राफिक प्रमुख राजिव श्रेष्ठले जान्कारी दिनु भयो।